Iza sa inona i satana? | Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa - Fiangonan'Andriamanitra andriamanitra Suisse
Ny anjely dia noforonina fanahy. Vonona malalaka izy ireo. Ireo anjely masina dia manompo an'Andriamanitra amin'ny maha-iraka sy iraka azy, dia fanahy izay mamonjy famonjena ary hiaraka amin'i Kristy amin'ny fiverenany. Ny anjely tsy mankatò dia antsoina hoe demony, fanahy ratsy ary fanahy maloto (Hebreo 1,14:1,1; Apokalypsy 22,6: 25,31; 2: 2,4; Matio 1,23:10,1; Petera; Marka; Matio).
Satana dia anjely lavo, mpitarika ny hery ratsy ao amin'ny tontolon'ny fanahy. Niresaka momba ny fomba maro samihafa izy ao amin'ny Soratra Masina: devoly, fahavalo, ratsy fanahy, mpamono olona, ​​mpandainga, mpangalatra, mpaka fanahy, mpiampanga antsika, dragona, andriamanitr'izao tontolo izao, sns .. Izy dia amin'ny fikomiana hatrany amin'Andriamanitra. Noho ny fitaomany, dia mamafy fifandirana sy fisolokiana ary tsy fankatoavana eo amin'ny olona izy. Efa resy ao amin'i Kristy izy ary ny fanjakany sy ny fahefany amin'ny maha andriamanitr'izao tontolo izao dia hifarana amin'ny fiverenan'i Jesosy Kristy (Lioka 10,18:12,9; Apokalypsy 1: 5,8; 8,44 Petera 1,6: 12; Jaona 3,1:2; Joba 12,10: 2-4,4; Zakaria 20,1: 3-2,14; Apokalypsy 1:3,8; Korintiana; Apokalipsy; Hebreo; Jaona).
Milaza ny Baiboly fa iray ihany ny Andriamanitra (Mal 2,10:4,6; Efesianina) ary Ray, Zanaka ary Fanahy Masina izy (jereo ny lesona No. 5). Satana dia tsy manana ny mampiavaka ny andriamanitra. Tsy mpamorona izy, tsy manaja, tsy mahay, tsy feno fahasoavana sy fahamarinana, tsy «ilay mahery tokana ihany, ny mpanjakan'ny mpanjaka sy tompon'ny tompo rehetra» (1 Timoty 6,15). Ny soratra masina dia manondro fa i Satana dia isan'ireo anjely noforonina tamin'ny endriny tany am-boalohany. Ny anjely dia noforonina hanompo fanahy (Nehemia 9,6; Hebreo 1,13-14), ary nomena safidy malalaka.
Manatanteraka ny didin’Andriamanitra ny anjely ary mahery ny olona (Salamo 103,20: 2; 2,11 Petera). Notaterina ihany koa izy ireo mba hiarovana ny mpino (Salamo 91,11) ary midera an'Andriamanitra (Lioka 2,13: 14-4; Apokalypsy, sns).
I Satana, izay midika hoe "fahavalo" ary ny devoly koa dia devoly, dia mety nitondra ny ampahatelon'ny anjely tamin'ny fikomiana tamin'Andriamanitra (Apokalypsy 12,4). Na eo aza izany fivadiham-pinoana izany, Andriamanitra nanangona "anjely an'arivony" manodidina azy (Hebreo 12,22). Ny demony dia anjely izay "tsy nitana ny lanjany any an-danitra, fa nandao ny tranony" (Jodasy 6) ary niaraka tamin'i Satana. «Satria tsy niaro ny anjely na dia ny anjely nanota aza, fa nanosika azy ireo ho any amin'ny helo amin'ny gadra maizina ary nanolotra azy ireo mba hihazonana azy ireo ho fitsarana» (2 Petera 2,4). Ny asan'ny demony dia voafetra amin'ireo rojo ara-panahy sy metafora ireo.
Ny fanodikodin'ireo fizarana rehetra ao amin'ny Testamenta Vaovao, toa an'i Isaia 14 sy Ezekiela 28, dia manondro fa anjely dia anjely manokana, ka nanombatombana fa arkanjely io dia tsara eo anatrehan'Andriamanitra. "Tsy mety diso" i Satana hatramin'ny andro namoronana azy mandra-pahitana ny heloka nataony, ary "feno fahendrena sy tsara tarehy mihoatra ny maro" izy (Ezekiela 28,12: 15).
Lasa “feno faharatsiana” anefa izy, nirehareha ny fony noho ny hatsarany, ary rava ny fahendreny noho ny famirapiratany. Nahafoy ny fahamasinanany sy ny fahaizany nandrakotra ny famindram-po izy ary lasa "fahitana" voatendry haharingana (Ezekiela 28,16: 19).
Niova tamin'ny jiro i Satana (ny anarana hoe Lucifera ao amin'ny Isaia 14,12 dia midika hoe "Light Bringer") amin'ny "herin'ny maizina" (Kolosiana 1,13; Efesiana 2,2) rehefa nanapa-kevitra izy fa tsy ampy ny toerany amin'ny maha-anjely azy ary te ho tonga andriamanitra tahaka ny "Avo Indrindra" izy. (Isaia 14,13: 14).
Ampitahao amin'ny fihetsik'ilay anjely John te hivavaka: "Aza manao izany." (Apokalypsy 19,10). Tsy tokony ivavahana ny anjely satria tsy Andriamanitra izy ireo.
Satria namorona sampy ny fiaraha-monina noho ny sanda ratsy izay notohanan'i Satana, ny Soratra Masina dia miantso azy hoe “Andriamanitr'izao tontolo izao” (2 Korintiana 4,4), sy ilay mahery izay "manjaka eny amin'ny rivotra" (Efesiana 2,2), izay fanahy ratsy dia na aiza na aiza (Efesiana 2,2). Saingy tsy avy amin'Andriamanitra i Satana ary tsy eo amin'ny ambaratonga ara-panahy toa an'Andriamanitra.
«Ny devoly manota hatrany am-piandohana» (1 Jaona 3,8). «Izy dia mpamono olona hatrany am-piandohana ary tsy ao amin'ny marina; satria tsy ao aminy ny marina. Raha mandainga izy dia miteny ny azy avy; satria mpandainga izy sady rain'ny lainga » (Jaona 8,44). Amin'ny lainga nataony dia miampanga ny mpino "andro aman'alina eo anatrehan'Andriamanitsika" (Romana 12,10).
Ratsy ihany izy, toy ny nitaona ny olona hanao ratsy, tamin’ny andron’i Noa: ny poezia sy ny fitadiavana ny fony ihany no ratsy (Genesisy 1:6,5).
Ny faniriany dia ny hampiasa ny heriny ratsy amin'ny mpino sy ny mpino mety hisakana azy ireo amin'ny "hazavana mamirapiratra amin'ny filazantsaran'i Kristy" (2 Korintiana 4,4) ka tsy mahazo “mandray anjara amin'ny toetra araka an'Andriamanitra” (2 Petera 1,4).
Ho amin'izany dia tarihiny ny ota hanota rehefa nanandrana an'i Kristy (Mat. 4,1: 11), ary nampiasa fitaka izy, toa an’i Adama sy Eva, mba hiarovana azy ireo “hiala amin’ny fahatsorana an’i Kristy”. (2 Korintiana 11,3). Mba hahatanterahany izany dia mody ho "anjelin'ny mazava" izy indraindray. (2 Korintiana 11,14), ary mody ho tonga zavatra nefa tsy izany.
Amin'ny alàlan'ny fakampanahy sy ny fitarihan'ny fiaraha-monina eo ambany fifehezany, i Satana dia manandrana mamporisika ny kristiana hanalavitra ny tenany amin'Andriamanitra. Ny mpino iray manasaraka ny tenany amin'ny faniriany malalaka hanota amin'Andriamanitra, amin'ny alàlan'ny fanarahana ny toetran'ny olombelona mpanota, manaraka ny fomba ratsin'i satana ary manaiky ny fisolokiany maro (Matio 4,1: 10-1; 2,16 Jaona 17: 3,8-5,19; 2,2; 1,21: 1; Efesiana 5,8: 3,15; Kolosiana; Petera; Jakoba).
Zava-dehibe anefa ny mahatadidy fa i Satana sy ny demoniany, anisan'izany ny fanahian'i Satana rehetra, dia eo ambany fahefan'Andriamanitra. Avelan’Andriamanitra hisy ny hetsika toy izany satria sitrapon’Andriamanitra ny hanafaka ny mpino (safidy malalaka) handray fanapahan-kevitra ara-panahy (Joba 16,6-12; Marka 1,27; Lioka 4,41; Kolosiana 1,16-17; 1 Korintiana 10,13; Lioka 22,42; 1 Korintiana 14,32).
Ny valiny ara-Baiboly voalohany an'ny mpino an'i Satana sy ny fiezahany hitaona antsika hanota dia "ny manohitra ny devoly ka handositra anao izy" (Jakoba 4,7: 4,1; Matio 10), izany no nanomezana azy “tsy misy toerana” na fotoana (Efesiana 4,27).
Ny fanoherana an'i Satana dia ahitana ny vavaka ho fiarovana, ny fanekena an'Andriamanitra amin'ny fankatoavana an'i Kristy, ny fahafantarana ny fisaratsian'ny ratsy manintona antsika, ny fahazoana toetra (izay nantsoin'i Paoly ny fametrahana ny fiadian'Andriamanitra rehetra), ny finoana an'i Kristy izay mikarakara antsika amin'ny Fanahy Masina (Matio 6,31; Jakoba 4,7; 2 Korintiana 2,11; 10,4-5; Efesiana 6,10-18; 2 Tesaloniana 3,3). Ny hoe manohitra dia midika koa hoe mailo ara-tsaina, "satria ny devoly mandehandeha toy ny liona mierona ary mitady izay hihinana" (1 Petera 5,8: 9).
Fa ambonin'izany rehetra izany, dia mametraka ny fitokisantsika amin'i Kristy. Ao amin'ny 2 Tesaloniana 3,3 dia mamaky isika fa "mahatoky ny Tompo; Izy io dia hanatanjaka anao sy hiaro anao tsy hanao ratsy ». Miantehitra amin'ny fahatokisan'i Kristy isika amin'ny alalan'ny "fiorenan'ny finoantsika" ary amin'ny vavaka manokan-tena tanteraka hanafaka antsika amin'ny ratsy (Matio 6,13).
Ny Kristiana dia tokony hitoetra ao amin'i Kristy (Jaona 15,4) ary aza miditra amin'ny asan'i Satana. Tokony hieritreritra zavatra manan-kaja ianao, madio, madio, tsara tarehy, ary hanana laza tsara (Filipiana 4,8) misaintsaina fa tsy handinika ny "halalin'i satana". (Apokalypsy 2,24).
Ny mpino dia tsy maintsy manaiky ny andraikiny handray andraikitra amin'ny fahotany manokana ary tsy hanome tsiny an'i Satana. I Satana angamba no namorona ny ratsy, fa izy sy ny demoniany ihany no tsy mitazona ny ratsy satria ny lehilahy sy ny vehivavy no namorona sy nanohy ny safidiny manokana hamorona ny tenany. Ny olona, ​​tsy Satana sy ny demoniany, no tompon'andraikitra amin'ny fahotany (Ezekiela 18,20; Jakoba 1,14-15).
Ny fomba fijery toy izany dia tsy araka ny Baiboly. Tsy misy ny ady mitohy ho an'ny fanapahana an'izao tontolo izao amin'ny herin'ny maizina, tarihin'i Satana, ary ny herin'ny tsara, tarihin'Andriamanitra. Mpahary noforonina fotsiny i Satana, manohana tanteraka an'Andriamanitra, ary manana fahefana ambony indrindra Andriamanitra. Jesosy dia nandresy tamin'ireny fitak'i Satana rehetra. Amin'ny finoana an'i Kristy dia efa nahazo fandresena isika, ary manana fahefana Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra (Kolosiana 1,13:2,15; 1:5,4; 93,1 Jaona 97,1; Salamo 1; 6,15; 19,6 Timoty; Apokalypsy).
Noho izany, ny Kristianina dia tsy tokony hanahy be loatra momba ny mandaitra ny fanafihan'i Satana hamelezana azy ireo. Na ny anjely na ny fahefana na ny fahefana "tsy afaka mampisaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesosy" (Romana 8,38-39).
Indraindray dia vakiantsika ao amin'ny Filazantsara sy ny Asa fa Jesosy sy ny mpianatra izay nomeny fahefana manokana dia nandroaka demony tamin'ny olona izay nikorontana ara-batana sy / na ara-panahy. Maneho izany ny fandresen'i Kristy amin'ny herin'ny maizina. Ny antony nanosika dia nahitana ny fangorahana ny fijaliana sy ny fanamafisana ny fahefan'i Kristy, Zanak'Andriamanitra. Ny fandroahana demonia dia nifamatotra tamin'ny fanamaivanana ny fijaliana ara-panahy sy / na ara-batana, fa tsy ny fanontaniana ara-panahy amin'ny fanesorana ny ota manokana sy ny vokany. (Matio 17,14-18; Marka 1,21-27; Marka 9,22; Lioka 8,26-29; Lioka 9,1; Asa 16,1-18).
Tsy hampangovitra ny tany intsony i Satana, hampihozongozona ny fanjakana, hanao an'izao tontolo izao ho tany foana, handrava tanàna ary hihazona ny zanak'olombelona hihidy ao amin'ny tranon'ny voafonja ara-panahy. (Isaia 14,16: 17).
«Izay manota dia avy amin'ny devoly; satria ny devoly manota hatrany am-piandohana. Ankoatr'izay, ny Zanak'Andriamanitra dia niseho mba handrava ny asan'ny devoly » (1 Jaona 3,8). Amin'ny famporisihana ny mpino hanota dia nanana fahefana hitarika azy ho amin'ny fahafatesana ara-panahy i Satana, izany hoe fisarahana amin'Andriamanitra. Saingy nanao sorona ny tenany i Jesosy "ka ny nahafatesany no hakany fahefana avy amin'ireo mifehy ny fahafatesana, dia ny devoly" (Hebreo 2,14).
Rehefa hiverina i Kristy, dia hanaisotra ny fitaoman'i Satana sy ny demoniany izy, ankoatry ireo izay mitazona ny fitarihan'i Satana tsy manenina amin'ny alàlan'ny fanipazana azy ireo indray mandeha sy any amin'ny farihy Gehna (2 Tesaloniana 2,8: 20; Apokalypsy).
Satana dia anjely lavo izay mitady ny hanimba ny sitrapon'Andriamanitra ary hanakana ny mpino tsy hanatratra ny tanjany ara-panahy. Zava-dehibe ny hahatokisan'ny mpino ny fitaovana ampiasain'i Satana nefa tsy dia hampaninona an'i Satana na demony loatra izy ka tsy manararaotra antsika i Satana (2 Korintiana 2,11).